राजधानी उज्यालो बनाएका ऊर्जामन्त्रीका मलिन सम्झना - UrjaKhabar राजधानी उज्यालो बनाएका ऊर्जामन्त्रीका मलिन सम्झना - UrjaKhabar
राजधानी उज्यालो बनाएका ऊर्जामन्त्रीका मलिन सम्झना
माओवादी केन्द्रका नेता तथा ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ पछिल्लो समय चर्चाको केन्द्रमा छन् । किनकि, काठमाडौंलाई लोडसेडिङमुक्त बनाएर उज्यालो बनाउने श्रेय शर्मालाई पनि जान्छ । सहरलाई उज्यालो बनाएर नेपालीको मुहारमा खुसी भर्न सफल यी मन्त्री आफूचाहिँ कत्तिको खुसी छन् ? विगतका कस्ता र कुन घटना उनलाई अहिले पनि सम्झनामा आउँछ ? दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा माओवादी लडाकुको ‘डेपुटी कमान्डर’समेत भएका शर्मासँग नयाँ पत्रिकाका कृष्ण कट्टेलले भेटेर उनका अविष्मरणीय क्षणबारे सोधेका छन् । त्यही भेटघाटका आधारमा तयार पारिएको फिचरः
सरसर्ती सुन्दा लाग्छ, ऊर्जामन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’को जन्म नै ‘विद्रोह’का लागि भएको हो । १४ वर्षे स्कुले ठिटोबाट सुरु भएको त्यो विद्रोह शर्माको जीवनमा अद्यापि ‘कायमै’ छ ।
केही दिनअघि सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा भेट्दा शर्मा अत्यन्त व्यस्त थिए । उनको निजी कार्यालयबाहिर उनलाई भेट्न केही कार्यकर्ता तथा अन्य व्यक्ति कुरिरहेकै थिए । उनी मात्र होइन, उनको सचिवालयलाई पनि एउटा कोठाबाट अर्को कोठामा पुग्न भ्याइनभ्याई थियो ।
यो व्यस्तताबीच मन्त्रालयको ‘घुम्ने कुर्सी’मा तीनतिरबाट टेबलले घेरिएर बसेका शर्मालाई भेट्न तोकिएको समयबाट पनि झन्डै आधा घन्टाभन्दा बढी कुर्नुपर्ने भयो । ‘यो व्यस्तता नै यस्तै,’ भेटिसकेपछि शर्माले नै कुराकानी थालनी गरे, ‘कतिवेलै सकिने होइन, लौ हामी कुराकानी गरौँ ।’
०४२ सालमा पहिलोपटक प्रचण्डलाई भेटेपछि नेपालमा सशस्त्र क्रान्तिको सम्भावना र आवश्यकता भएको निर्णयमा पुगेका शर्मा युद्धकालमा झन्डै सरकारी सेनासँग भएको जम्काभेटदेखि पहिलोपटक मन्त्री हुँदासम्मका घटना बिर्सन सक्दैनन्
त्यसपछि शर्मा मुसुक्क हाँसे । उनको अनुहारमा त्यस्तै उज्यालो देखियो, जस्तो ‘अँध्यारोमा अभ्यस्त’ काठमाडौं उपत्यका आजभोलि देखिन्छ । पछिल्ला केही महिना काठमाडौंमा ‘लोडसेडिङ’ हटेकाले सम्भवतः शर्मालाई पहिलोपटक भेट्ने अधिकांशले सुरुमा धन्यवाद र बधाई सँगसँगै दिन्छन् र कुराकानी सुरु गर्छन् ।
‘हो नि,’ शर्मा भन्छन्, ‘यसले सबै नेपालीलाई खुसी बनाएको हुनुपर्छ ।’ तर, गत बिहीबार शर्मासँगको यो भेटघाट लोडसेडिङको अन्त्य र उनका भावी योजनाबारे कुरा गर्न थिएन । पहिले नै तय भएअनुसार शर्माले यो भेटमा आफूले नबिर्सिने घटना सम्झिनुपर्ने थियो ।
अघिसम्म हँसिलो देखिएको शर्माको अनुहार अब एकाएक मलिन भयो । उनी विगतका अनेक तीता घटनामा छिरिसकेका थिए ।
तर, कुराकानीको सुरुवातचाहिँ शर्माले सुखद प्रसंगबाट गरे । यो शर्मा पाँच वर्षको हुँदाको हो । उनी पहिलोपटक स्कुलमा गएको दिन अहिले पनि सम्झिन्छन् । ‘मलाई गुरु शिवकुमार शर्माले अक्षराम्भ गर्नुभएको हो,’ थोरै मलिन भएको उनको अनुहारमा फेरि उत्साह थपियो, ‘विद्यालयको आँगनमा बसेर मैले क र अ भनेको अहिले पनि सम्झना छ ।’
अक्षरहरूसँगको त्यो सामीप्यताको त्यो पल अहिले पनि बारम्बार शर्माको मनमा आउँछ र उनलाई जिम्मेवार बोध गराउँछ । पाँच वर्षमा जुन विद्यालयको आँगनमा टेकेर पहिलो अक्षर चिनेका थिए, त्यही स्कुलमा पछि ‘विद्रोह’ गर्नुपर्ला भनेर शर्माले चिताएका पनि थिएनन् ।
तर, परिस्थिति नै त्यस्तो बन्यो, जब शर्मा स्वयं आफूलाई पढाउने शिक्षकहरूविरुद्ध उठ्नुपर्ने भयो । यतिवेला शर्मा ‘गोल्डेन स्कुलेजीवन’ बिताइरहेका थिए । १४ वर्षका उनमा जस्तो सोच आयो, त्यसले ठूलै विद्रोहको स्वरूप लिन्छ भनेर कसैले पनि चिताएको थिएन । तर, स्कुलका शिक्षक, व्यवस्थापन समिति र गाउँका केही ‘नेताहरू’ मिलेर शर्माले पढिरहेको स्कुलको भवन बेच्ने निर्णय गरेका थिए, जसले १४ वर्षे शर्मालाई भित्रैसम्म ‘पोलेको’ थियो । ‘सानैदेखि अन्याय नसहने स्वभाव रहेछ मेरो,’ शर्मा भन्छन्, ‘कुन चेतले काम गरेको थियो कुन्नि ? हामी केही साथी मिलेर स्कुल भवन बेच्ने भएको त्यो निर्णयविरुद्ध नाराबाजी गर्ने पो भयौँ, हामीले आन्दोलन गर्ने भयौँ ।’
स्कुलको राम्रो भवन बेचेर झुप्रो किन्नमा सहमत भइसकेका त्यो स्कुलका शिक्षकहरू र अन्य व्यक्तिहरू ०३४ सालमा शर्माले चालेको यो कदमबाट अचम्ममा मात्र परेनन्, अन्ततः आफ्नो निर्णय सच्याउन बाध्य पनि भए । आफूले पाइला राख्दै आएको स्कुललाई बेचिनबाट बचाउन सकेपछि शर्माको जोस र विश्वास ह्वात्तै बढ्यो ।
त्यो जोस, आत्मविश्वास र अन्यायविरुद्ध आवाज उठाउने शर्माको निर्णयलाई थप साथ र सहयोग मिलेको चाहिँ ०४२ सालमा हो । यसको अर्थ के होइन भने यसअघि उनी ‘अन्यायविरुद्धको मोर्चा’मा होमिइसकेका थिएनन् । उनी त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मसालको सक्रिय सदस्य भइसकेका थिए । र, मनमा अठोट पालिसकेका थिए– म समान समाजका लागि लड्नेछु । त्यसैले रुकुममा ०४२ सालमा भएको पार्टीको भूमिगत बैठकमा उनले केन्द्रीय नेतालाई सोधेका थिए, ‘के नेपालमा क्रान्ति सम्भव छ ?’
क्रान्तिको अवधारणाबारे मनमा मात्र किन नहोस्, एउटा खाका बनाइसकेका प्रभाकारलाई त्यो दिन मसालका ती केन्द्रीय नेताले ४५ मिनेटभन्दा धेरै बिफ्रिङ गरे । ती नेताले थपेका थिए– अब त नेपालमा क्रान्ति गर्नैपर्छ, यसको सख्त आवश्यकता छ । शर्माले पहिलोपटक नेपालमा सफल हुने क्रान्तिको मोडल पनि तिनै नेताबाट सुनेका थिए । शर्मा छोटो समयमा नै ‘कन्भिन्स’ भए ।
एकातिर त्यो दिन शर्माको मस्तिष्कमा आफूलाई क्रान्तिबारे सजग बनाएको दिन भनेर ‘प्रिन्टेड’ छ भने योसँगै अर्को महत्वपूर्ण ‘इभेन्ट’ पनि त्यही दिनले बोकेको छ । ‘मलाई त्यसरी क्रान्तिबारे भन्ने अरू कोही नभएर कमरेड प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो,’ अहिले शर्मा खुसी हुँदै सम्झन्छन्, ‘उहाँसँगको मेरो पहिलो भेट पनि त्यही थियो, जुन म चाहेर पनि बिर्सन सक्दिनँ ।’
त्यसपछि शर्माको जीवनमा उतार–चढावको लामो शृंखला सुरु भयो । उनीविरुद्ध ‘वारेन्ट’ जारी भयो । तत्कालीन सरकारले शर्मालाई र पार्टीका नेताहरूलाई ‘क्लोज निगरानी’मा राख्न थाल्यो । यता, शर्मा सरकारको त्यो ‘गिद्धे नजर’ छल्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भर्ना भइसकेका थिए । यहीबीच ०४६ साल चैत २४ गते काठमाडौंको टुँडिखेलमा ‘विशाल जनसभा’ आयोजना भयो ।
‘त्यो कार्यक्रम सफल बनाउनैपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ थियो,’ शर्मा अहिले २६ वर्षअगाडिको त्यो घटना सम्झन्छन्, ‘मनमा गणतन्त्रको नारा लगाउनु अब हो भन्ने लागिसकेको थियो ।’ तर, कीर्तिपुरमा विश्वविद्यालयको गेटमा उनले पनि मान्दै आएका एक नेताले भाषण गरे– अहिले नै गणतन्त्रको नारा लगाउनुहुन्न ।
शर्माको मनमा छटपटी सुरु भयो । ‘अनि मैले आफूलाई सम्हाल्नै सकिनँ,’ शर्मा अहिले पनि उत्तिकै जोसका साथ सम्झन्छन्, ‘म गेटको अर्को पिल्लरमा चढेँ र नारा लगाएँ– गणतन्त्र जिन्दावाद ।’ त्यो दिनको जोसिलो ‘मास’ले शर्माको नारालाई बारम्बार ‘रिपिट’ ग¥यो । मनमा उत्साह लिएर जुलुस टुँडिखेल पुग्दा सहिदगेटबाटै लामो लाइन लागिसकेको थियो । केहीबेरमा प्रहरीले गोली चलाउनुले शर्माको मनमा ‘ठूलै हलचल’ ल्याइदियो ।
‘त्यो दिन मेरा लागि राजनीतिक इतिहासको अविष्मरणीय दिन हो,’ शर्मा भन्छन् । राजनीतिक अभियानमा होमिएका शर्माको जीवनमा अर्को ‘टर्निङ’ पनि पार्टीकै निर्णयले ल्याइदियो । पार्टीकै आदेशमा काठमाडौंबाट दाङ पुगेका शर्मा आफ्नो जीवनबारे पार्टीले आफूसँग सल्लाह नै नगरी गरेको निर्णयका कारण झसंग भए ।
‘पार्टीले केही जिम्मेवारी दिन दाङ बोलाएको होला भन्ने सोचेको थिएँ,’ उनी अनुहारमा मुस्कान छर्छन् र भन्छन्, ‘तर, पार्टीले त मेरो जीवनमाथि नै पो निर्णय गरेको रहेछ । दाङ के पुगेको थिएँ, पार्टीका नेताहरूले तपाईं अब विवाह गर्नुहोस् पो भन्नुहुन्छ । मैले सुरुमा नाइँनास्ती त गरेँ, तर पार्टीका नेताहरूले भन्नुभयो– यो पार्टीको निर्णय हो ।’
कुनै रोमान्टिक फिल्मको स्क्रिप्टजस्तै लाग्ने विवाहबारे सुनाउँदा शर्मा मुस्कुराए, अनि थपे, ‘केटी हेरेँ । हामीले एक–अर्कालाई मन पनि परायौँ र हाम्रो विवाह भयो ।’ ०४६ सालको फागुन ३० गते शर्मा वैवाहिक बन्धनमा बाँधिए ।
‘विवाह गरेको दिन पनि कसरी बिर्सिऊँ,’ शर्माले विवाहबारे भनिसकेपछि थपे । विवाहपछिको जीवनमा शर्मासँग सम्झनका लागि अनगिन्ती दिनहरू छन् । यस्तो किन पनि भने राजनीतिमा होमिएका शर्माले माओवादी शान्तिप्रक्रियामा नआउँदासम्म औँलामा गन्न सकिने दिन परिवारसँग बिताएका छन् ।
राजनीतिक यही यात्राका कारण हुनुपर्छ, शर्माले छोरी जन्मिएको कुरा पनि केही दिनपछि मात्र सुने । पार्टीको अभियानमा लामो समय बिताएर घर फर्किंदा बाटोमै शर्माले सुने, ‘छोरी उता बा खोइ भनेर कराइरहेकी छे, तपाईं कहाँ जानुभएको थियो ?’
लामो बाटो हिँडेर त्यो दिन घर पुगेका शर्माले छोरीले आफूलाई सम्झिएको सुन्नेबित्तिकै सबै थकान बिर्सिए । ‘त्यस्तो खुसीको खबर सुनेको दिन म कसरी बिर्सिऊँ,’ सायद ढोकामा कोही आएको आभास गरे, शर्मा दाहिनेतिर रहेको ढोकातिर फर्किए र विगतमा पुगे, ‘बाबु बनेँ भन्ने थाहा पाएको दिन म बिर्सनै सक्दिनँ ।’ नभन्दै ढोकामा उनका स्वकीय सचिव आएका रहेछन् ।
शर्मा आफ्नो मुटुको पोयो फुकाउँदै थिए, उनले सहयोगीलाई संकेत गरे, ‘सकिएको छैन ।’ अनि फेरि अगाडि फर्किएर शर्माले अँध्यारो अनुहार बनाए । ‘सशस्त्र युद्धका घटना सम्झिँदा अहिले पनि नरमाइलो लाग्छ,’ शर्माले मलिन हुनुको कारण आफैँ खोले, ‘मलाई युद्धमा लागेका सबै आफ्ना प्रिय लाग्थे, जब आक्रमणहरूमा उहाँहरूको सहादतबारे सुन्थेँ, मन नै अमिलो हुन्थ्यो ।’
तर, शर्मा त्यतिवेला डेपुटी कमान्डर थिए । मन जतिसुकै अमिलो किन नहोस्, उनले अर्को आक्रमण योजना कार्यान्वयन गर्नैपर्ने हुन्थ्यो । ‘यो युद्धकै नियम हो, आफ्ना लडाकुको आत्मबल बढाउन म आफैँ पनि अग्रपंक्तिमा जान तयार हुन्थेँ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसले दिएका घाउहरू अनगिन्ती छन्, कहिले भोकभोकै त, कहिले खुकुरीको धारमा हिँड्नुपर्ने हुन्थ्यो । ती वर्षका प्रत्येक घटना म बिर्सन कसरी सकुँला र ?’ माओवादी केन्द्रका प्रायः सबै नेताको जीवनको एक दिन पक्कै पनि अविष्मरणीय हुन्छ । किनकि, दश वर्षे लामो युद्धमोर्चामा नगएका नेता विरलै होलान् ।
के माओवादी सेनाका ‘डेपुटी कमान्डर’समेत बनिसकेका शर्माको जीवनमा त्यस्तो दिन छैन त ?
‘कैलालीबाट पहाड उक्लिरहँदाको त्यो दिन झन्डै मेरो जीवनको अन्तिम दिन भएको थियो,’ लामो सुस्केरा हाल्छन् शर्मा, ‘यात्राकै क्रममा हामी एउटा घरमा पुगेका थियौँ । हामीले दही खायौँ । नास्ता खाँदैनौँ भन्दा पनि त्यहाँका घरबेटीले कर गर्नुभएको थियो । हामी छिटो त्यो घरभन्दा एक किलोमिटर टाढाको जंगलमा पुग्नु थियो । दही खाएर नास्ता नखाएकैले हामी उम्कियौँ, किनकि त्यतिवेला त्यहाँ सरकारी सेना आइसकेको रहेछ ।’
जीवनको अन्तिम ‘ब्रिन्क’ थियो त्यो दिन शर्माका लागि । त्यसपछिका दिनहरू शर्मा किन पनि सम्झन्छन् भने आफ्नै आँखाअगाडि उनले आफूले चिताएको व्यवस्था आएको देख्न पाए । देशमा गणतन्त्र घोषणा होस् भन्ने जुन शर्माको चाहना थियो, त्यो उनकै आँखाअगाडि भयो ।
यही परिवर्तनको ‘सरप्राइज गिफ्ट’ पाए शर्माले ०६४ सालमा । ‘सिएम कमरेडले मलाई कोट लगाएर आउनु भन्नुभयो, उहाँको निवासमा पुगेपछि मात्र थाहा पाएँ, मलाई पार्टीले मन्त्रीमा नियुक्त गरेको रहेछ,’ शर्मा भन्छन्, ‘पहिलोपटक मन्त्री हुँदाको दिन पनि म बिर्सन्न सक्दिनँ ।’
अहिले दोस्रोपटक मन्त्री हुँदाका क्षण पनि शर्मा बिर्सन सक्दैनन् । ‘किनकि, यसपटक मैले धेरै सपना बुनेको छु, त्यसलाई पूरा गरेरै छाड्ने अभियानमा छु,’ उनी भन्छन् ।